१३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सुरु - Kantipath.com
१३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सुरु
बुधबार दिउँसो तीन बजे महिला भलिबलको उद्घाटन खेल हुनेछ। पुरुष भलिबलमा पनि नेपालले सोही दिन बंगलादेशलाई चुनौती प्रस्तुत गर्नेछ । एक राष्ट्र भुटानको भलिबलमा सहभागिता छैन। दुई साताअघि बंगलादेशमा सम्पन्न सेन्ट्रल जोन महिला भलिबलमा च्याम्पियन नेपाल उच्च मनोबलका साथ कोर्टमा उत्रनेछ। नेपाली महिला टोली सागमा स्वर्ण पदक जित्ने लक्ष्यका साथ उत्रँदै छ। नेपालकी कप्तान अरुणा शाहीले यस पटक घरेलु मैदानमा स्वर्ण पदक जित्दै इतिहास रच्ने लक्ष्यमा रहेको बताइन्।
उद्घाटन समारोहका ओलम्पिक एवम् सागका कीर्तिमानी खेलाडी दीपक विष्टले ओलम्पिक टर्च बाल्नेछन्। खेलाडी, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक, पाहुना र दर्शक गरी करिब १५ हजारले जनाले प्रत्यक्ष रूपमा सागको उद्घाटन समारोह हेर्नेछन्। औपचारिक रूपमा आइतबार १३औं सागको उद्घाटन भएसँगै नेपालबाट जन्म भएको सागको तीन संस्करण नेपालमा हुनेछन।
२६ खेलमध्ये पोखरामा ८ खेल हुँदा जनकपुरमा एक मात्र प्रतिस्पर्धा कुस्ती हुनेछ। बाँकी खेल भने काठमाडौं हुनेछन्। यस संस्करणमा नेपालले सबै खेलमा सहभागिता जनाउँदा कुल ५ सय ९३ जना खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। नागरिक
Previous Previous post: नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने दिन गए, अनेरास्ववियु
Next Next post: बैंककै कर्मचारीको मिलेमतोमा लाखौ चोरी : किर्ते हस्ताक्षरका चेक बरामद !
विश्वकप इतिहासमा भारत र न्यूजिल्याण्ड पहिलो पटक सेमिफाइन भिड्दै !
जावलाखेललाई सिन्धुकप फुटबलको उपाधि
आईपीएलबाट बाहिरियो बैंगलोर, आज चेन्नई र दिल्लीबीच खेल हुने
बार्सिलोना र अजाक्स च्याम्पियन्स् लिग फुटबलको सेमिफाइनलमा
बंगबन्धु गोल्डकप : आज नेपाल र प्यालेस्टाइन भिड्दै